DPA Microphones အော်စကာဆန်ခါတင်ရုပ်ရှင်တိုများအတွက်အသံဖမ်းယူ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » DPA မိုက်ခရိုဖုန်းအော်စကာဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီးက Short Film သည်အသံ Capture
screet ™ 4061 အသေးစားမိုက်ခရိုဖုန်းကိုသူတဦးတည်းကိုစားစလေိုကွောငျးဤမျှလောက်: ဒိသံကိုဒီဇိုင်နာနှင့်ရုပ်ရှင် recordist Malthe Bjørn Jensen DPA ရဲ့ဃ likes အသံ! ဒါဟာစစ်မှန်တဲ့ရဲ့ - သူကယ့်ကိုသူကဤသေးငယ်သော MICS ၏တဦးတည်းမျိုလျှင်သူကိုဖမ်းယူစေခြင်းငှါ, အဘယျသို့အသံကြည့်ဖို့စပ်စုသည်။
ဒါကြောင့်အမှန်တကယ်အဘို့ဤကြိုးစားကြဖို့မဖြစ်ကောင်းအကောင်းဆုံးရဲ့အသိအမှတ်ပြုနေစဉ်, ဂျင်ဆင်ကပြောပါတယ်: "အစဉ်မပြတ်ငါတကယ်သင်တို့သည်ဤသည်အလွန်သေးငယ်တဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းကနေရယူကြီးတွေအသံသည်အားဖြင့်အထင်ကြီးခဲ့ကြရတယ်။ သူတို့ရဲ့သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားကသူတို့ကိုအလွန်အသုံးစေသည် - ငါမကြာခဏရုပ်ရှင်အပေါ်သူတို့ကိုအသုံးချပိုကြီးတဲ့မိုက်ခရိုဖုန်း fit မဟုတ်ဘူးနေရာများအတွက်အသံမှတ်တမ်းတင်ဖို့သတ်မှတ် "။
Jensen ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မဖြစ်အောင်ကြိုးတွေရှိခြင်းကိုလည်းဖုံးကွယ်ဖို့သူတို့ကိုလွယ်ကူသောကြောင့်ထပ်ပြောသည်။ "ဥပမာအားဖြင့်ငါသရုပ်ဆောင်များကို '' ဝတ်စုံ၌သူတို့ဖုံးကွယ်ဖို့ဝတ်စုံဌာနနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးမှတ်တမ်းတင်တာပါလျှင်" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "ငါသည်များသောအားဖြင့်ရှဲရှဲပပျောက်ဖို့ DPA ဖုံးကွယ်ခြင်းနှင့်အတုများကိုသားမွေးတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းကိုသုံးပေမယ့်ဝတ်စုံတင်းကျပ်စွာလျှင်တစ်ခါတစ်ရံတွင်, ငါသည်သူတို့ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်သောကွောငျ့ Bubblebee မမြင်နိုင်သော Lavalier မျက်နှာဖုံးများကိုသုံးပါ။ ဒါဟာမိုက်ခရိုဖုန်းရဲ့ဇယားကွက်သငျသညျအသံ muffles တဲ့ဝတ်စုံအတွက်မိုက်ကရိုဖုန်းတည်နေရာအားအခါစံပြဖြစ်သည့်အဆင့်မြင့်တဲ့ mid-range ထဲမှာတစ်ဦးထပ်တိုးထောက်ပံ့ပေးကြောင်းလည်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ "
သင်တစ်ဦးစန်းမြင်ချင်ကြဘူးဘယ်မှာ wide angle ရိုက်ချက်များရိုက်ကူးအထူးသဖြင့်လာသောအခါ Jensen DPA lavalier မိုက်ခရိုဖုန်းကနေရရှိသွားတဲ့သောအသံအရည်အသွေး, မကြာခဏရုပ်ရှင် set ကိုအပေါ်တစ်ဦးအသုံးဝင်သော back-up ဖြစ်ပါတယ်။
"ကျွန်မနေတဲ့ DPA ဃကိုအသုံးပြုဖို့: ကဃအတူတကယ်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့အ ShotGun မိုက်ကရိုဖုန်းအဖြစ် dicate ™ 4017B: screet ™ 4061 အသေးစား MICS" ဟုသူကရှင်းပြသည်။ ကျွန်မပို့စ်တွင်လုပ်ဖို့လျော့နည်းအလုပ်ရှိသည်နှစ်ခုနည်းလမ်းများအကြားက "လမ်းသံကိုခွင်။ ငါသည်ဤမိုက်ခရိုဖုန်း၏အသံကိုချစ် - ခြင်းနှင့်သင်တစ်ဦးအနေဖြင့်များအတွက်အားကစားရုံမှဖူးကြပြီမဟုတ်ပါလျှင်၎င်းသည်စန်းအပေါ်ပေါ့ပါးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေရာလေးကိုပါ! ဒါဟာပြင်ပမှတ်တမ်းတင်ဘို့နှင့်ကြာကြာသေနတ်များမျက်နှာကျက်အောက်မှာ fit ပါဘူးဘယ်မှာဒါမှမဟုတ်သူတို့သိပ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖွင့်ကောက်နဲ့လိုက်တယ်အဆင့်အမှုတို့ကိုပြုဘယ်မှာအိမ်တွင်းကောင်းမွန်သည်။ ငါသညျလညျးကရပ်တည်ချက်အပေါ်တပ်ဆင်ထားများသောအားဖြင့်အတူ, အသံသက်ရောက်မှုမှတ်တမ်းတင်ဖို့အသုံးပြုပါတယ်။ "
လောလောဆယ်ဘာလင်နှင့်ကိုပင်ဟေဂင်အကြားအခြေခံ Jensen ရုပ်ရှင်အသံကအဓိကပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါသည် - ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ post နှစ်ဦးစလုံး။ သူလည်းစီမံကိန်းများကိုကျော်ကြော်ငြာခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းများအသံကိုဂီတ composes ။
"ဒိန်းမတ်အတွက်တိုးတက်နေတဲ့တိုတောင်းသောရုပ်ရှင်မြင်ကွင်းတစ်ခုဒိနျးမတျရုပ်ရှင်ပွဲတော် Institute မှ, စူပါ 16 (ကပုဂ္ဂလိကအခြားရွေးချယ်စရာ) နှင့်အနည်းငယ်သည်အခြားသေးငယ်အဖွဲ့အစည်းများကထောက်ခံသည်ဤဇာတ်ကားအများအပြားနှင့်အတူရှိနေသည်" ဟုသူကရှင်းပြသည်။ "ကျနော်တဦးတည်း, အသံတိတ်ညအပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောအဖွဲ့အစည်းများအဘို့အထူးထူးအပြားပြားစီမံကိန်းများအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်, အဲဒီက M & M က Productions အားဖြင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်က Short ရုပ်ရှင်ပွဲတော် (တိုက်ရိုက်လှုပ်ရှားမှု) အမျိုးအစားအတွက် 2017 အော်စကာများအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်း, Aske ဘန်များကညွှန်ကြားခဲ့သည်။ "
Jensen ဆောင်းတွင်းကျော်နျောတောင်ပေါ်မှာနေရာပေါ်သေနတ်ခဲ့ကွောငျးအခြားအတိုရုပ်ရှင်မှပေါ်ရွေ့လျားမတိုင်မီအသံတိတ်ညများအတွက်တည်နေရာ audio က, အသံသက်ရောက်မှုနှင့် Foley မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။
"သောကြောင့်အားလုံးမိုဃ်းပွင့်ခြင်းနှင့်ဝေးလံခေါင်ဖျားတည်နေရာ, ငါကတစ်ဦးအလွန်လှပသောအသံများနှင့်တိတ်ဆိတ်ရုပ်ရှင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေပါတယ်" လို့သူကပြောပါတယ်။
ယခုလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်နျောတိုတောင်းသောရုပ်ရှင်များအတွက်အသံနှင့်အတူ, Jensen ပို့စ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်ကသူ့အာရုံကိုအာရုံစူးစိုက်သည်။
"ကျွန်မကိုလည်းတည်းဖြတ်လိုအပျကွောငျးအနည်းငယ်ကအခြားစီမံကိန်းများရရှိပါသည်, ဒါကြောင့်ငါအတော်လေးအလုပ်များဖြစ်၏" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "အဲဒီအမှုကိုပြုင့်ပြီးတာနဲ့ငါ DPA မိုက်ခရိုဖုန်းကို အသုံးပြု. အခြားအတိုရုပ်ရှင်မှတ်တမ်းတင်ခံရကြလိမ့်မည် - များနှင့်မျှော်လင့်သောနောက်, ငါတောင်ပိုကြီးတဲ့အရာတစ်ခုခုပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ "
DPA မိုက်ခရိုဖုန်းပရော်ဖက်ရှင်နယ် application များအတွက်အရည်အသွေးမြင့် condenser မိုက်ခရိုဖုန်းဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ဒိန်းမတ် Professional ကအသံထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ DPA ရဲ့အန္တိမရည်မှန်းချက်ကအမြဲတိုက်ရိုက်အသံတပ်ဆင်ခြင်း, အသံဖမ်း, ပြဇာတ်ရုံနဲ့ထုတ်လွှင့်တို့ပါဝင်သည်သမျှသောက၎င်း၏စျေးကွက်များအတွက်အကြွင်းမဲ့အာဏာအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောမိုက်ခရိုဖုန်းဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူ၎င်း၏ဖောက်သည်များကိုရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမှကြွလာသောအခါ, DPA မျှ shortcuts တွေကိုကြာပါသည်။ မဟုတ်သလိုဒိန်းမတ်အတွက် DPA စက်ရုံမှာပြုထားတဲ့သူ့ရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်ကုမ္ပဏီကစေ့စပ်ညှိနှိုင်းပါဘူး။ ရလဒ်အဖြစ် DPA ၏ထုတ်ကုန်တကမ္ဘာလုံးဟာသူတို့ရဲ့ခြွင်းချက်ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်းနှင့်မြင်သာ, မတူနိုင်တဲ့သတ်မှတ်ချက်များ, အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်, ရှိသမျှအထက်, စင်ကြယ်သော uncolored နှင့် undistorted အသံကချီးကျူးနေကြသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.dpamicrophones.com
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ : D: dicate မှတ်တမ်းတင်မိုက်ကရိုဖုန်း ဃ: screet 4061 အသေးစားမိုက်ခရိုဖုန်း DPA မိုက်ကရိုဖုန်း Malthe Bjorn Jensen အော်စကာအမည်စာရင်းတင်သွင်း post ကိုထုတ်လုပ်မှု ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2017-04-27
ယခင်: ရီနည်းပညာနှင့် Google NAB 2017 မှာ Yi ရောင်ခြည်တော်စက်ဝန်းမိတ်ဆက်
နောက်တစ်ခု: FileCatalyst ဗဟိုနှင့်တိုက်ရိုက်ပေးဖို့ Feature ကို-Rich Update ကိုဆောင်ကြဉ်း